Mpanamboatra sy mpamatsy lamba an-tampon'ny China | Smartroof
Tafo vita amin'ny vy
Takelaka metaly haingon-trano
Tafo fanitso vita amin'ny vy
Tafo vita amin'ny plastika mihombo
Roofing PVC fisaka
Roofing vita amin'ny kapila
Hamafana ny tafo an-tampon-trano
T ranslucent C orrugated R oof P anels PVC Translucent Roof vita amin'ny roof vita amin'ny tontonana SMARTROOF dia marika fanta-daza, izay manokana amin'ny Roofing mandritra ny 10 taona mahery. Tsy vitan'ny fanatsarana ny endrika tafo fotsiny, fa manampy amin'ny famahana ny fanoherana manimba sy ny insulation hafanana ho an'ny tafo …….
Panam-baravarankely mazava amin'ny translucent an'ny PVC:
Panam-baravarana mitafo fanitso
T ranslucent C orrugated R oof P anels PVC Translucent Roof vita amin'ny roof vita amin'ny tontonana SMARTROOF dia marika fanta-daza, izay manokana amin'ny Roofing mandritra ny 10 taona mahery. Tsy vitan'ny fanatsarana ny endrika tafo fotsiny, fa manampy amin'ny famahana ny fanoherana manimba sy ny insulation hafanana ho an'ny tafo .......
Panel amin'ny tafo mitafo fanitso PVC
SMARTROOF dia marika fanta-daza, izay manam-pahaizana manokana amin'ny Roofing mandritra ny 10 taona mahery. Tsy vitan'ny fanatsarana ny endrika tafo fotsiny, fa manampy amin'ny famahana ny fanoherana manimba sy ny insulation hafanana ho an'ny tafo. Mandritra izany fotoana izany, ny ekipanay dia miahy fatratra ny kalitao sy ny serivisy ary manolo-tena hanampy ny namana manerantany hahita ny tafo mety.
Item Panel amin'ny tafo mitafo fanitso PVC
Fitaovana miorina PVC / Plastika
Fitaovana firakotra No
Additional Agent UV / Agent mampiorina
sakany 1130mm / 1360mm
Ny sakany mahomby 1050mm / 1240mm
Length Namboarina / fenitra
hateviny 1.0mm / 1.2mm / 1.5mm
Color Fotsy / manga / maintso
Guarantee 8 taona
Ny takelaka mangarahara ao amin'ny PVC dia fitaovana manandanja tena ilaina amin'ny fampiharana isan-karazany amin'ny fananganana trano, indostrialy ary varotra. Izy ireo dia ampiharina indrindra amin'ny fahazoana jiro mba hahatonga ny habaka hitazava kokoa sy hitsitsy ny vidin'ny jiro sy ny fandefasana rivotra. Izy ireo dia hita fa ampiasaina amin'ny trano fanatobiana entana, zavamaniry, atrikasa, trano maintso, toeram-pambolena zavamaniry sns.
Mety te hahafantatra ianao:
1. Orinasa mpivarotra na mpanamboatra ianao?
- Mazava ho azy fa mpanamboatra isika! Manolotra anao ny vidin'ny outlet izahay fa tsy misy vidiny mpanelanelana.
2.Inona no atao hoe ASA?
--ASA (Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer) dia karazan-plastika vaovao novolavolaina voalohany tamin'ny taona 1970. Izy io dia manana endri-javatra tena tsara toy ny toetran'ny mekanika sy ara-batana miorina, fanoherana ny toetr'andro lehibe, fandeferana amin'ny hafanana avo lenta, fanaporofoana ny franklinisma.
3.Inona no atao hoe PVC?
--PVC (Polyvinyl chloride) dia fitaovana plastika malaza ihany koa novolavola voalohany tamin'ny taonjato 20, ampiharina amin'ny sehatra maro.
4.Eco-friendly ve ny vokatrao?
-Ny vokatra vita amin'ny tafo plastika dia tsy misy asbestos, ary tsy misy poizina, tsy misy tsirony.
5. Manao ahoana ny fe-potoana fandoavanao vola?
-Amin'ny ankapobeny dia T / T 30% mialoha, fandanjalanjana aloany alohan'ny hametrahana azy.
6. Ahoana no fomba ahazoana santionany?
- Misy santionany maimaim-poana raha ny entana entin'ny mpividy.
Previous: Tafio tafo mitafo
Manaraka: Skylight House
Skylight amin'ny tafo fisaka
Tafo fisaka Skylight
Takelaka an-tampon'ny Skylight mangarahara
Takelaka boribory polycarbonate
Takelaka tafo polycarbonate
Takelaka tafo plastika
Tafo fisaka plastika
Tafo fisaka Pvc
Takelaka polycarbonate Twinwall
Room H, 30 / F, Foshan Development Building, No.13, East Hua Yuanrd, Foshan, Guangdong, Sina